Nkwado dị mfe: Ngwá Ọrụ Nkwado n'efu maka Social Media | Martech Zone
Nkwado dị mfe: Ngwá Ọrụ Nkwado n'efu maka Social Media
Wednesday, February 19, 2020 Wednesday, February 19, 2020 Douglas Karr
Otu akụkọ m na-ahapụbeghị m bụ enyi ahụ Akara Schaefer ekere òkè n'afọ ndị gara aga mgbe ị na-ekwu okwu na ogbako. Ọ tụlere akara mba ụwa nke nwere ọtụtụ narị puku ndị ọrụ. Ndi otu ndi otu ndi otu ha na emeputa ihe omuma nke ndi mmadu… nke na onweghi onye obula na-aza ma obu na-ekerita. Mark jụrụ ụdị echiche ụlọ ọrụ ahụ mere mgbe ndị ọrụ nke akara ahụ etinyeghị aka ma ọ bụ kekọrịta ọdịnaya ụlọ ọrụ ahụ na-eweta?
N'ezie, enwere ụfọdụ ndị ọrụ na-edobe ndụ onwe ha iche na profaịlụ mmekọrịta ha. Agbanyeghị, enwere ndị ọrụ na - achọpụta ọrụ n'ụlọ ọrụ ha nke ọma, ndị ahịa gị na ndị ọgbọ gị tụkwasịrị gị obi nke ọma, ndị nwere ike ikwughachi ma bulie ahịa nke nzukọ gị. Gini mere ị naghị eji ha?
E nwekwara ndị na-eme ihe ike dị na netwọ mmekọrịta gị na ndị ahịa nwere ike ịkekọrịta mgbasa ozi mgbasa ozi gị. You na-abanyekwa ndị ahụ?
Nkwado dị mfe: Ntọala efu sitere na Agorapulse
M na a ogologo oge ofufe nke ụlọ ọrụ na ngwaọrụ site na Agorapulse. Ngwaọrụ igbe ha na-elekọta mmadụ, n'uche nke m, ọ kacha mma na ahịa. Companylọ ọrụ ahụ malitere nkwado nke onwe ha, na-anabata atụmatụ dị oke egwu, na-efu ọnụ, ma na-enye ọmarịcha interface ebe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere ike nyochaa, tụọ, bipụta, ma zaghachi ọwa mgbasa ozi ọhaneze site na otu njirimara ọrụ. Agorapulse abụwo onye ahịa nke m… ma m na-anọgide na-abụ mgbakwunye maka ha.
Agorapulse ghọtara na enwere ohere dị ukwuu maka ndị ọrụ na ohere ịkwado ohere iji gbasaa ozi nke aka ha, yabụ ha kere Nkwado dị mfe, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ n'efu.
Akụkụ nke Mkpebi Mgba
Ngwa Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Na-agba ọsọ a haziri ahazi, nkwado zuru ezu na mgbasa ozi na-erughị nkeji 10. Tinye ozi ịntanetị na ndepụta nkesa gị, detuo URL nke ihe ịchọrọ ịkekọrịta ma gbakwunye nkọwa, wee pịa zipu!
Mee ka ringkekọrịta Ọdịnaya Dị Mfe - Ndị ọrụ gị ga - ahụ ihe niile ha chọrọ ịkekọrịta n’otu ebe. Ozi gị nwere ike gbasaa na Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest ma ọ bụ site na email.
Mara Ruo Ogologo Ọdịnaya Gị - Ozugbo lee mgbasa ozi ndị na-arụ ọrụ ma nweta ọtụtụ clicks na ndị ọbịa. Hụ onye na nkesa ndepụta gị kachasị arụ ọrụ ma na-anapụta ọtụtụ echiche! Inwe onye ndu ọhụụ na-agba ndị ọrụ ume ka ha bulie nsonaazụ.
Tinye Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Hụchalụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Kesaa Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị
Lelee nsonaazụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị
Nke a abụghị naanị ngwa ọrụ ọzọ anaghị atụfu n'ahịa, ndị otu na Agorapulse na-eji ngwa a iji kesara ndị ọrụ ha na ndị ọrụ ha na netwọkụ ha na mgbasa ozi. Dị ka onye na-akwado ọrụ ha, enwere m ike ijide gị na ọ na-eme ka ndụ m dịkwuo mfe ebe ọ bụ na edeela ma dezie usoro niile nke ozi na njikọ. Enwere m ike ịme obere tweaks iji hazie ozi ahụ - ma kesaa ya n'ime sekọnd.
Ẹkedori gị mbụ Advocacy Mgbasa Ozi
Tags: Nkwado dị mfefree ịkwado ikpo okwunkwenye na-akpali akpaliịkọrọ mmadụ mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi
Nduzi: Otu Organic Marketing Platform maka Enterprise MarTech Stack
Renderforest: Real-Time Video Editing na Animation Templates Online